‘२८ वाणिज्य बैंकहरु’ : आव ०७२/०७३ मा कसको प्रगती कस्तो ? (हेर्नुस् विस्तृतमा) – Banking Khabar
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा निजीस्तरका बैंकहरुले उल्लेख्य प्रगती गरेका छन् । खुद मुनाफामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै यस्ता बैंकहरुले आफूलाई सबल सावित गरेका छन् । तर, सरकारी स्वामित्वका रहेका बैंकहरुको भने नाफा घटेको पाइएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक पूर्णतयाः सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरु हुन् । दुबैको नाफा घटेको छ । निक्षेप र कर्जा लगानी दुबैमा बढोत्तरी गरेका बैंकहरुको व्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेको छ । तर, नियमित क्रियाकलापबाट हुने आम्दानी र बोनस तथा करअघिको नाफा घट्दा दुबै बैंकको नाफामा कमी आएको देखिन्छ । निजीस्तरका बैंकमध्ये, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा घटेको छ । अरु सबै बैंकको नाफा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको निर्देशन पूरा गर्न यो वर्ष थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर, एक्विजिसन, हकप्रद तथा बोनस शेयर निष्काशन जस्ता बाटोहरु अपनाए । यसैको परिणाम गत वर्षको प्रगती विवरणमा देखिएको छ । सरकारी र निजीस्तरका गरेर हालसम्म १८ वटा बैंकहरु अर्वपति क्लबमा पुगिसकेका छन् । यसैबिच, बैंकिङ खबर डट कमले सबै वाणिज्य बैंकहरुहरुको गत आर्थिक वर्षको प्रगती विवरण संकलन गरेको छ । हेर्नुस्, कुन बैंकको प्रगती कस्तो ?
नेपाल बैंकको नाफा ३ अर्बभन्दा माथि
नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो बर्षको तुलनामा ५ सय २३ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको हो । अघिल्लो बर्षको सोहि अवधिमा बैंकले जम्मा ४८ करोड ३८ लाख रुपैंया मात्र कमाएको थियो । ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा ३८ करोड ४७ लाख रुपैंया रहेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी ४ अर्ब ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा २ अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकले जोखिम व्यवस्थापन कोषमा ३५ करोड ६५ लाख रुपैंया छुट्याएको छ भने ६२ करोड ९३ लाख रुपैंया खराब कर्जाबाट उठाएको छ । बैंकको निश्क्रिय कर्जा २ दशमलब ७२ प्रतिशत रहेको छ भने जोखिमयुक्त सम्पति ११ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ । बैंंकको प्रतिशेयर आम्दानी ४६ दशमलव ६९ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानीको अनुपात १० दशमलव ०७ गुणा, प्रतिशेयर नेटवथ १ सय ५ दशमलव ९५ रुपैयाँ र तरलता अनुपात ३७ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ ।
नविल बैंकको नाफा २ अर्ब ८२ करोड
नविल बैंकले गत आर्थिक बर्षमार २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो आवको तुलनामा ७३ करोड रुपैयाँ बढि नाफा कमाएको हो । केही वर्षदेखि नाफामा सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई उछिन्दै आएको बैंक गत वर्षको नाफाको आधारमा दोस्रो स्थानमा धकेलिएको छ । पहिलो स्थानमा यस पटक नेपाल बैंक आएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुको मात्रै नाफा हेर्दा भने नविल बैंक नै अग्रस्थानमा छ । बैंकले यसअवधिमा एक खर्ब १० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७७ अर्ब ७३ करोड कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ । नविलले खुद ब्याज आम्दानीमा ८० करोड रुपैयाँ बढोत्तरी गर्दै ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । ४ अर्ब ७५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ७ अर्ब ५९ करोेड रुपैंयाँ रहेको छ । खराबकर्जा घटाएर बैंकले प्रोभिजनमा ५० लाख रुपैयाँ राखेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी झण्डै ६० रुपैयाँ पुर्याएको छ । बैंकको प्रति शेयर नेटवर्थ २ सय ५९ रुपैयाँ रहेको छ भने तरलता अनुपात २६ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको जोखिमयुक्त सम्पति १२ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा २ अर्ब ६४ करोड
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको मुनाफा गत वर्षको तुलनामा ४२ दशमलव ९७ प्रतिशत कम हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ६४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । बैकले सो अवधिमा १ खर्ब ४६ अर्ब २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने कर्जातर्फ ८५ अर्ब ४७ करोड ३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यस्तै, बैंकको खुद व्याज आम्दानी ५ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको नियमित क्रियाकलापबाट हुने आम्दानी ३६ दशमलव ५१ प्रतिशतले घटेको छ भने बोनस तथा कर अघिको नाफा ३८ प्रतिशतले घटेको छ । ८ अर्ब ५८ करोड चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा ७३ करोड रुपैयाँ राखेको छ । एक वर्षको अवगधिमा १ अर्ब ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा १ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको निश्क्रिय कर्जा १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेर ३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीकोषमा (जोखिम भारित सम्पत्ति) १ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेर ११ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि विकास बैंकको नाफा २ अर्ब ५७ करोड
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ । बैंकको मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८ दशमलव ४७ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकले ८७ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी कर्जातर्फ ७९ अर्ब ७५ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी ६ अर्ब १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ६८ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको नियमित कारोबारबाट हुने आम्दानी २० दशमलव ७४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, बोनश र कर अघिको नाफा २० दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ । १० अर्ब ३७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडा कोषमा ८ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राखेको छ । एक वर्षमा ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खराबकर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ५६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको जोखिमयुक्त सम्पत्ति १ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेर १२ दशमलव ८४ प्रतिशतमा कायम भएको छ भने निश्कृय कर्जा १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ३ दशमलव ८५ प्रतिशतमा कायम भएको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी ५५ दशमलव ६४ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १३ दशमलव ८० गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ ३ सय ३ दशमलव १५ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २३ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुनाफा साढे २ अर्ब
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० दशमलव ०२ प्रतिशत बढी मुनाफा कमाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा बैंकले १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा १० अर्ब ५५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । १ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी बैंकले कर्जामा ८७ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी ३ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रोभिजनमा ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नकारात्मक रहेको बैंकले सो अवधिमा ३५ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक) ३५ दशमलव १६ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात (वार्षिक) २९ दशमलव ५८ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ २ सय ४५ दशमलव ४९ रुपैयाँ रहेको छ । निष्कृय कर्जातर्फ शुन्य दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेर शुन्य ६८ प्रतिशत रहेको छ भने जोखिमयुक्त सम्पतिमा ४ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेर १६ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ ।
हिमालयन बैंकको मुनाफा १ अर्ब ९१ करोड
हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैंया खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि १ अर्बमाथिको नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो आवको सोहि अवधिमा बैंकले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । ४ अर्ब ४९ करोड रुपैंया चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आवमा बैंकले ८७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । जबकि, अघिल्लो आवमा बैंकले ७३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवमा १७ अर्ब ११ करोेड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको बैंकले गत आवमा १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको व्याज आम्दानी ३ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ४३ हजार रुपैंया पुगेको छ । सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ९९ करोड ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पूँजी कोष पर्याप्तताका आधारमा १० दशमव ९१ प्रतिशत रहेको बैंकको निष्कृय कर्जा अनुपात १ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । मूल्य आम्दानीे अनुपात ३५ दशमलव २३ र प्रति शेयर नेटवर्थ १ सय ९७ रुपैयाँ रहेको बैंकको तरलता अनुपात २८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले यसरी कमायो पौने २ अर्ब मुनाफा
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७३ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद मुनाफामा ९ दशमलव ९१ प्रतिशतले बढोत्तरी गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको थियो । २ अर्ब ७४ करोड २६ रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडा कोषमा ५ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा १२ दशमलव ०४ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९३ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ २३ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढाएर ६८ अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १२ दशमलव १२ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा १८ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ६६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा ९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राखेको छ । एभरेष्ट बैंकको प्रति शेयर आम्दानी ६५ दशमलब ९७ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात ५१ दशमलब ३१ गुणा, प्रति शेयर नेटवर्थ ३ सय २३ दशमलब ८१ रुपैयाँ र तरलता अनुपात ३५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव २८ प्रतिशतले घटेर शुन्य ३८ प्रतिशत रहेको छ भने जोखिम युक्त सम्पत्ति शुन्य दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेर १२ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ ।
ग्लोबल आईएमईको नाफा १ अर्ब ३८ करोड
ग्लोबल आइएमइ बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक पहिलोपटक विलेनियर क्लवमा प्रवेश गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बैंकले ९६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । बैंकले अघिल्लो बर्ष दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा यसपाली बढाएर दुई अर्ब ८८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसवाहेक विदेशी विनिमयबाट हुने आम्दानी पनि वढेको छ । अघिल्लो बर्ष ५४ करोड ८६ लाख नोक्सानी व्यवस्थापन गरेको बैंकले यसपाली ५९ करोड रुपैयाँ गरेको छ । बैंकले ७४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी कुल कर्जा लगानी १० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ६० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । बैंकले डुबेकोमध्ये २५ करोड २२ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । बैंकको खराव कर्जा २.२३ प्रतिशतबाट घटेर १.८७ प्रतिशतमा झरेको छ । ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको पुँजी कोष अनुपात १२.३५ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिशत सेयर आम्दानी साढे २२ प्रतिशत छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २२.८९ गुणा छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकको मुनाफा १ अर्ब ३३ करोड
नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले गत वर्षमा १ अर्ब ३३ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएकोे छ । बैंकले गत वर्षको तुलनामा २४ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ३ अर्ब ८८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकले जगेडाकोषमा ३ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ राखेको छ । ६५ अर्ब २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी बैंकले कर्जातर्फ ४६ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी २ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा २ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेको छ भने ६ करोड रुपैयाँ राइटव्याक गरेको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव १४ प्रतिशतमा झरेको छ भने जोखिम युक्त सम्पत्ति १३ दशमलव ३३ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ३४ दशमलव २९ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात ५४ दशमलव ६८ गुणा, नेटवर्थ १ सय ७९ रुपैयाँ ६७ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २७ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा सवा १ अर्ब
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा खुद १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ । बैंकको मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको थियो । २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकको निक्षेप २ दशमलव ७२ प्रतिशतले घटेको छ । जसअनुसार, ५५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, ३१ अर्ब ६९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी २ दशमलव ९२ प्रतिशतले घटेको छ । जसअनुसार एक वर्षमा १ अर्ब ८५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । सञ्चालन मुनाफा पनि ८ दशमलव ४८ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ । सो अवधिमा २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा २५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक) ४५ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानीेको अनुपात (वार्षिक) ८० दशमलव ०१ गुणा, प्रति शेयर नेटवर्थ २ सय ५६ दशमलब ५९ रुपैयाँ रहेको छ । जोखिमयुक्त सम्पति १५ दशमलव ८२ प्रतिशत र निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको नाफा सवा १ अर्ब
बिजिनेश युनिभर्सल डेभ्लपमेन्ट बैंकलाई आफुमा गाभेको सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब २६ करोड खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बैंकले ७७ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको थियो । सो अवधिमा बैंकले ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । चुक्ता पूँजी ३ अर्ब २ करोड रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब २३ करोड छ । सिद्धार्थको निस्क्रिय कर्जा अनुपात १.४१ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी ४१ रुपैयाँ रहेको बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात २२ र प्रतिशेयर नेटवर्थ २ सय ६ रहेको छ ।
एनबी बैंकको नाफा १ अर्ब १९ करोड
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकले १ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएर यो बैंक पहिलोपल्ट अर्बपति क्लबमा प्रवेश गरेको हो । अघिल्लो बर्ष एनबी बैंकले ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
बैंकले ३७ करोड रुपैयाँले खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ भने खुद व्याज आम्दानी १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ऋण लगानी २५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको बैंकले खराव कर्जा १.३३ प्रतिशतबाट झारेर ०.७१ प्रतिशतमा ल्याएको छ । बैंकसँग सर्वसाधारणको ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । तीन अर्ब तीन करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३९ रुपैयाँ छ । साढे चार प्रतिशतभन्दा वढीको स्प्रेडमा काम गरेको बैकको सेयरको मूल्य आम्दानी अनुपात २२ गुणा छ ।
एनएमबी बैंकको नाफा १ अर्ब १५ करोड
गत आर्थिक वर्षमा एनएमबि बैंक लिमिटेडले दोब्बरभन्दा पनि बढीले नाफा बढाएको छ । ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले वर्षभरिमा १ अर्ब १५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ सय २८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा बैंकले ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकको खुद व्याज आम्दानी १ सय ८ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सञ्चालन मुनाफा ५५ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ । ६४ अर्ब ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले ५३ अर्ब ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा ६३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खराबकर्जा उठाउन सफल भएको बैंकले प्रोभिजनमा ५१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोषमा २ अर्ब ४६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा १ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेर १ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको छ भने जाखिमयुक्त सम्पत्तिमा शुन्य दशमलव १२ प्रतिशतले घटेर ११ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक २८ दशमलव ६६ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात २७ दशमलव ४९ गुणा, तरलता अनुपात २७ दशमलव ४५ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ५४ दशमलव ९१ रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रभु बैंकको नाफा १ अर्ब १४ करोड
प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा १ अर्ब १४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत वर्षको तुलनामा १२ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको हो । गत वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले १ अर्ब १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो । ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले बैंकले निक्षेपमा ४४ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि गरि ६० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने कर्जामा ६२.४२ प्रतिशतले बढाएर ४८ अर्ब २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यस्तै, खुद व्याज आम्दानी २७ दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ अर्ब ९६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ भने सञ्चालन मुनाफामा पनि ३ सय ८५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ८७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । बैंकको प्रोभिजनमा २७ करोड रुपैयाँ नोगेटिभमा रहेको छ भने १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खराबकर्जा उठाउन बैंक सफल भएको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी १९ दशमलव ५१ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै निष्कृय कर्जा १ दशमलब ०५ प्रतिशतले बढेर ८ दशमलव ३८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने जोखिम युक्त सम्पति १ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेर १२ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको नाफा १ अर्ब १२ करोड
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८ करोडभन्दा बढीले नाफा बढाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ७४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । ३ अर्ब ७० करोड ५२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैकले जगेडाकोषमा १ अर्ब ७५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राखेको छ । ४८ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ ४० अर्ब २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी १४ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ४८ दशमलव ८९ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले प्रोभिजनमा २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राखेको छ भने २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी ३० दशमलव ४५ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीेको अनुपात २४ दशमलव ५० गुणा, प्रति शेयर नेटवर्थ १ सय ४६ दशमलव ३९ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २५ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । बैकको निष्कृय कर्जातर्फ शुन्य दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर १ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ भने जोखिमयुक्त सम्पति शुन्य दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेर ११ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा १ अर्ब ८ करोड ९९ लाख
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकले एक वर्षमा खुद नाफा करिब ३७ करोड रुपैयाँ बढाएको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद नाफा ७२ करोड ३ लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षमा निक्षेप करिब १२ अर्ब र कर्जा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । जसअनुसार, गत असार मसान्तसम्म ५५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने कर्जा लगानी ४० अर्ब ५६ लाख रुपैयाँ छ । बैंकले खुद व्याज आम्दानी ३५ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । करोड रुपैयाँ अन्य सञ्चालन नाफाबाट प्राप्त भएको छ भने विदेशी विनिमय कारोबार बाट बैंकले १४ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । बैंकले यो वर्ष ४३ करोड रुपैयाँ राइटव्याक गरेको छ । त्यस्तै गैरसञ्चालन आम्दानी १४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले ३२ करोड रुपैयाँ संभावित नोक्सानीका लागि प्रोभिजन पनि गरेको छ ।
एनआईसी एसिया बैंकको नाफा १ अर्ब ७ करोड
एनआईसी एशिया बैंक पहिलो पटक अर्बपति क्लवमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर बाणिज्य बैंकहरुको अर्बपति क्लवमा प्रवेश गरेको हो । गत वर्ष बैंकले ६८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । यो वर्ष दुई वटा बाणिज्य बैंक( एनआईसी र बैंक अफ एशिया) गाभिएर बनेको एनआईसी एशियाको नाफा तुलनात्मक रुपमा कम देखिएको थियो । यस वर्ष बैंकले रेकर्ड बनायो । व्यापार बढाएरै बैंकले नाफामा उल्लेख्य बृद्धि गरेको हो । गत वर्ष बैंकले निक्षेपमा १६ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ६९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यस्तै कर्जा पनि १६ अर्ब रुपैयाँ नै बृद्धि गरेको छ । निक्षेप र कर्जामा गरेको बृद्धिले आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । बैंकले खुद व्याज आम्दानी नै ४० करोड रुपैयाँ बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले व्याज आम्दानी एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुर्यायो । त्यस्तै अन्य सञ्चालन आम्दानी ३४ करोड रुपैयाँ, ३२ करोड रुपैयाँ राइट व्याक पनि गरेको छ । विदेशी विनिमय कारोबारबाट १६ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।
सानिमा बैंकको नाफा १ अर्ब बढी
गत आर्थिक वर्षमा सानिमा बैंकले झन्डै १ अर्ब ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको मुख्य लगानी रहेको बैंकले खुद नाफामा ६७ प्रतिशतले बढोत्तरी गरेको हो । सानिमाले अघिल्लो आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा जम्मा ६२ करोड ४१ लाख खुद नाफा कमाएको थियो । सानिमाले गत वर्षभरिमा निष्कृय कर्जा ०.०२ प्रतिशतमा झारेको छ, जुन सबै वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा कम हो । जोखिम कोषमा भने बैंकले अघिल्लो बर्ष भन्दा बढी रकम राखेको छ । ब्याज आम्दानी र संचालन नाफामा उल्लेखनीय बढोत्तरी गरेको बैंकले निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा विस्तारको दरलाई बढाएको छ । कम्पनीको प्रति शेयर मूल्य र प्रति शेयर आम्दानीको आधारमा मूल्य आम्दानी अनुपात २१.६५ गुणा रहेको छ । बैंकको प्रति शेयर नेटवर्थ १४६ र पूँजी कोष १२.६५ प्रतिशत रहेको छ ।
सनराइज बैंकको नाफा ९५ करोड १७ लाख
नारायणी नेशनल फाईनान्सलाई ७७ प्रतिशत स्वाप रेसियोमा गाभेको सनराइज बैंकले चौथो त्रैमासमा ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँं खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय २ दशमलव १३ प्रतिशतले बढी नाफा गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा बैंकले ४७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको थियो । ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको बैंकले जगेडा कोषमा २ अर्ब १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकले निक्षेपमा ५४ दशमलव २४ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५१ अर्ब ६५ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै कर्जा प्रवाहतर्फ ६२ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि गरि ४२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ तथा लगानीतर्फ ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ९५ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले प्रोभिजनमा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राखेको छ । त्यसै गरि ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी २३ दशमलव ९८ रुपैयाँ रहेको छ भने मुल्य आम्दानीेको अनुपात ३१ दशमलव २४ गुणा रहेको छ । प्रति शेयर नेटवर्थ १ सय ५४ दशमलव ५६ रुपैयाँ रहेको छ र तरलता अनुपात २५ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । जोखिमयुक्त सम्पति ११ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ बैंकको निष्कृय कर्जा १ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ ।
माछापूछ्रे बैंकको नाफा ८९ करोड १८ लाख
माछापुच्छ्रे्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ८९ करोड १८ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको गरेको थियो । ३ अर्ब ८६ करोड चुक्ता पूँजी रहेको बैंकले जगेडा कोषमा १ अर्ब ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ राखेको छ । त्यस्तै निक्षेपमा साढे १८ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५२ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी २७ प्रतिशतले बढेर ४४ अर्ब २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी ३६ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ८५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै सञ्चालन मुनाफा ६९ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले प्रोभिजनमा १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ भने १२ करोड १ लाख रुपैयाँ राइटव्याक गरेको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ०९ प्रतिशतले घटेर शुन्य दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ भने जोखिमयुक्त सम्पत्ति शुन्य दशमलव ०१ प्रतिशतले घटेर १२ दशमलव २३ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ०८ पैसा, मूल्य आम्दानीको अनुपात २९ दशमलव ४७ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ३९ दशमलव ११ रुपैयाँ र तरलता अनुपात ६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको मुनाफा ७५ करोड ८१ लाख
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ७५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षकोभन्दा १ सय २६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । बैंक अफ काठमाडू र लुम्बिनी बैंक एक आपसमा गाभिएर बनेको बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेडको कुल चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले जगेडा कोषमा ३ अर्ब ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ राखेको छ । एक वर्षमा बैंकले ६७ अर्ब ८३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी कर्जातर्फ ६० अर्ब ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी १ अर्ब ५४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब १८ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । १ करोड १६ लाख रुपैयाँ खराबकर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक २४ दशमलव ५० रुपैयाँ, मूल्य आम्दानीको अनुपात वार्षिक २३ दशमलव ८८ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ७२ दशमलव २८ रुपैयाँ र तलरता अनुपात २३ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको निस्कृय कर्जा १ दशमलव २२ प्रतिशतले घटेर २ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ भने जोखिमयुक्त सम्पत्ति शुन्य दशमलव ६७ प्रतिशतले बढेर १३ दशमलव ६७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
कुमारी बैंकको नाफा पौने १ अर्ब
गत आर्थिक वर्षमा कुमारी बैंकले ७४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८७.५० प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याएको ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता भएपछि बैंकले नाफा कमाएको हो । बैंकको जगेडा कोषमा अहिले एक अर्ब ३८ लाख रुपैंयाँ रहेको छ भने चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ । खराब कर्जालाई २ दशमलब ४९ प्रतिशतबाट घटाएर एक दशमलब ११ प्रतिशतमा सिमित गर्न बैंक सफल भएको छ । बैंकले ३७ अर्ब ९५ करोड निक्षेप संकलन गरेर ३० अर्ब ११ करोड रुपैंयाँ कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ ४२ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५१ रुपैंयाँ ४३ पैसा रहेको छ ।
एनसीसी बैंकको नाफा ७० करोड ३० लाख
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी बैंक) ले गत आर्थिक वर्षमा ७० करोड ३० लाख ८८ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको छ । बैंकले खुद नाफामा २९ करोड ५४ लाख ३४ हजार रुपैंया अर्थात ७२ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढोत्तरी गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ४० करोड ७६ लाख ५४ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको थियो । चुक्ता पूँजी २ अर्ब ३५ करोड ३१ लाख ७६ हजार रुपैंया रहेको बैंकले जगेडा कोषमा १ अर्ब २८ करोड ४१ लाख ४५ हजार रुपैंया राखेको छ । सो अवधिमा बैंकले २३ करोड १७ लाख ५५ हजार रुपैंया राइट व्याक गरेर निष्कृय कर्जा अनुपात शुन्य दशमलव ९० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै, ३० अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैंया निक्षेप संकलन गरेर कर्जातर्फ २४ अर्ब ८९ करोड ११ लाख रुपैंया लगानी गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैंया व्याज आम्दानी गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा ७४ करोड ७६ लाख रुपैंया पुर्याएको छ । पूँजी कोष पर्याप्तता ११ दशमलव ८० प्रतिशत कायम गरेको बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २९ रुपैंया ८८ पैसा रहेको छ । प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ५४ रुपैंया ५७ पैसा रहेको बैंकको मुल्य आम्दानी अनुपात १२ दशमलव १५ तथा तरलता अनुपात २१ द्यशमलव ३९ र प्रतिशेयर कुल सम्पत्तीको मुल्य १ हजार ५ सय २ रुपैंया ६९ पैसा रहेको छ ।
लक्ष्मी बैंकको नाफा ६७ करोड
गत आर्थिक बर्षमा लक्ष्मी बैंकले ६७ करोड ३७ लाख मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अािघल्लो बर्षको तुलनामा झण्डै ६२ प्रतिशत अर्थात करिब २४ करोड रुपैयाँ धेरै नाफा कमाएको हो । अघिल्लो बर्ष बैंकले ४३ करोड ६३ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । ३ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको लक्ष्मी बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । ४८ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर बैंकले ४० अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा दश करोड खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको खराब कर्जा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर शुन्य ८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ १७ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १८५ रुपैंयाँ ७७ पैसा रहेको छ ।
मेगा बैंक लिमिटेडको मुनाफा ५५ करोड २० लाख
मेगा बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैकले ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । सो अवधिमा बैंकले १ अर्ब १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको छ भने ७२ करोड २ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा गरेको छ । एक वर्षभित्रमा १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ राखेको छ । ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ २७ अर्ब ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । जोखिमयुक्त सम्पत्ति १२ दशमलव ९७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १७ दशमलव ०४ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात ३३ दशमलव १७ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय २९ दशमलव ८५ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २५ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको छ । २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको मेगा बैंक र ३७ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको पश्चिमाञ्चल विकास बैंक गाभिएपछि बनेको मेगा बैंकको चुक्ता ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ ।
सेञ्चुरी बैंकको नाफा सवा ३८ करोड
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ३८ करोड २६ लाख नाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ४६ दशलमव ६७ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । २ अर्ब ८४ करोेड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ५३ करोड २६ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव २४ प्रतिशत रहेको बैंकले १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन राखेको छ भने ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाउन बैंक सफल भएको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी १३ रुपैंयाँ ४७ पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ ११८ रुपैंयाँ ७५ पैसा रहेको छ । बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा २८ अर्ब ९६ करोड निक्षेप संकलन गरेर २५ अर्ब ८ करोड कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ ।
जनता बैंकको मुनाफा साढे ३२ करोड
जनता बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यस बैंकले अघिल्लो वर्षको भन्दा ११६ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । बैंकको खुद व्याज आम्दानी २३.६७ प्रतिशतले बढेर ७४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । सो अवधिमा जनता बैंकले कुल निक्षेप संकलन २४ अर्ब ६ करोड ७५ लाख संकलन गरी २० अर्ब ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । १.१५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकले सो अवधिमा प्रतिसेयर वार्षिक आम्दानी १५.७९ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानी अनुपात २८ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १३०.२४ रुपैयाँ रहेको छ ।
सिभिल बैंकको नाफा ३३ करोडभन्दा बढी
सिभिल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड १४ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत वर्षको तुलनामा ४४ दशमलव १० प्रतिशतले नाफा बढाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २३ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । हाल ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राखेको छ । एक वर्षमा ३१ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी बैंकले कर्जातर्फ २५ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसैगरी खुद व्याज आम्दानी १६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ३३ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेर २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले प्रोभिजन ४७ करोड रुपैयाँ राखेको छ भने २८ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी १० दशमलव ७५ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानीे अनुपात २३ दशमलव ७२ गुणा रहेको छ । प्रति शेयर नेटवर्थ १ सय १७ दशमलव ३१ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २६ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर २ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ र जोखिमयुक्त सम्पति १ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेर १२ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रस्तुती : रुपा कोइराला